Xiisaha loo qabo iibsashada shirkadaha ganacsiga diyaarka ah ee Ruushka ayaa koray rubuc qarniga II 15% marka la barbar dhigo rubucii I ee 2020. Tan waxaa caddeynaya xogta cilmi baarista ee wakaaladda baarista B2B, oo ay soo bandhigtay adeegga saxaafadda ee Avito.
“Wadarta baahida loo qabo ganacsi diyaarsan oo laga sameeyay Ruushka ayaa hoos u dhacay 2020% marka la barbar dhigo rubucii ugu horreeyay ee 32, hase yeeshe, khubaradu waxay indha indheeyaan koritaanka warshadaha qaarkood. Dalka oo dhan, waxay 15% ka jecel yihiin shirkadaha wax soo saarka beeraha, ”daraasadda ayaa lagu sheegay.
Dadka daggan Moscow iyo Rostov-on-Don waxay u kordheen 70%, St. Petersburg - 39%, dadka degan Barnaul - 50%. Magaalada Togliatti, waxay xiiseynayeen shirkadaha beeraha seddex jeer in ka badan rubucii hore, Yekaterinburg iyo Volgograd - laba jeer inta badan.
Marka la barbardhigo isla muddadi sanadkii la soo dhaafay, xiisaha ganacsiga ganacsiga ee Ruushka wuxuu ku koray 43%.
Falanqeeyayaasha ayaa xusaya in guga uu yahay xilli dhaqameed baahi weyn u qabta shirkadaha noocan ah.
Waxaa diyaariyey Xarunta FSBI ee Agroanalytics oo ku saleysan agabyada tass.ru
Tags: ganacsiga beerahahorumarinta beeraha ee Russia